प्रदेश–३ को लगानी सम्मेलन चितवनमा आजदेखि | गृहपृष्ठ
Home प्रदेश समाचार प्रदेश–३ को लगानी सम्मेलन चितवनमा आजदेखि
चितवन । प्रदेश नम्बर ३ को विकास र समृद्धिको लागि शुक्रवार (आज) देखि चितवनमा लगानी सम्मेलन शुरू हुने भएको छ । निजी क्षेत्रलाई लगानीको आह्वान गर्न भरतपुरमा वैशाख ६ र ७ गते दुई दिने सम्मेलन हुने भएको हो ।
सम्मेलन प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको आयोजनामा हुन लागेको हो । यसबारे बिहीवार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममार्फत जानकारी दिइएको थियो । कार्यक्रममा आयोगका उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाले सम्मेलनबाट प्रदेशको विकासका आधारशीला तय गरिने बताए । उनका अनुसार प्रदेशका पूर्वाधार, उद्योग, कृषि, पर्यटन, सेवा उद्योग लगायतमा लगानीका सम्भावनाबारे निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिलाई जानकारी गराइने छ । यसका लागि आयोगले आधारपत्र प्रस्तुत गर्नेछ ।
आधारपत्रले प्रदेशको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर ११ दशमलव २ प्रतिशत हुने र प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक रू. ४ लाख ५ हजार पुग्ने लक्ष्य लिएको छ । ५ वर्षे योजना अवधिका लागि कुल स्थिर लगानी ३२ खर्ब ३७ अर्ब आवश्यक हुने आधारपत्रको प्रक्षेपण छ । कुल लगानीमध्ये ६२ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट हुने अनुमान गरिएको छ ।
सो अवसरमा आयोगका सदस्य श्याम बस्नेत प्रदेश विकास र समृद्धिको प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएको बताए । र अर्का सदस्य रामचन्द्र ढकालले निजी, सरकारी र सहकारी सबैको सहकार्यमा विकासको गति अघि बढाउन सम्मेलन आयोजना गरिएको धारणा राखे ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार जगन्नाथ थपलियाले निर्यातमुखी र सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा दुईदिने सम्मेलन फलदायी हुने विश्वास ब्यक्त गरे । सम्मेलनको पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ ।
सम्मेलनमा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, प्रदेशक मन्त्री तथा सांसद सहभागी हुने बताइएको छ । निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू, उद्योगपति विनोद चौधरी, गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्ट, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा लगायत सहभागी हुने जानकारी दिइएको छ ।